Iindlela ezili-10 zokufumana abaPhembeleli abagqibeleleyo kwibhrendi yakho
NgoLwesithathu, Juni 29, 2022 NgoLwesithathu, Juni 29, 2022 Amra Beganovic
Njengeshishini, uyazi ukuba ukuthengisa ngempembelelo yinxalenye ebalulekileyo yesicwangciso sakho sokuthengisa. Emva kwayo yonke loo nto, i-92% yabathengi bathembela kwimithombo yeendaba ngaphezulu kwayo nayiphi na enye indlela yokuthengisa, kwaye intengiso ye-influencer inokuhambisa ukuya kuthi ga kwi-11x ephezulu ye-ROI kuneendlela zemveli zentengiso yedijithali. Kodwa ngokhetho oluninzi phaya, kunokuba nzima ukufumana indlela yokufumana abaphembeleli abagqibeleleyo bohlobo lwakho. Nazi iingcebiso ezili-10 zokukunceda ufumane
Uqhuba njani iTrafikhi eyongezelelweyo kunye noguqulo oluvela kwimidiya yoluntu
NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, 2022 NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, 2022 Ann Smarty
Imithombo yeendaba zentlalo yindlela entle yokuvelisa i-traffic kunye nokwazisa nge-brand kodwa akulula kangako kuguqulo olukhawulezileyo okanye isizukulwana esikhokelayo. Ngokwemvelo, amaqonga eendaba ezentlalo anzima ukuthengisa kuba abantu basebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ukonwabisa kwaye baphazamiseke emsebenzini. Basenokungakulungeli kakhulu ukucinga ngeshishini labo, nokuba bangabenzi bezigqibo. Nazi iindlela ezimbalwa zokuqhuba itrafikhi kwaye uyiguqule ibe yinguqulelo, ukuthengisa, kunye
Ukunqongophala kokuchazwa kuka-Angi Roofing kunye nokungqubana komdla kufuneka kutsale ingqalelo.
NgoMvulo, Juni 20, 2022 NgoMvulo, Juni 20, 2022 Douglas Karr
Abafundi bopapasho lwam mhlawumbi bayaqonda ukuba siye sanceda iinkampani ezininzi ezifulelayo zakha ubukho bazo kwi-intanethi, zikhulise uphendlo lwazo lwasekhaya, kwaye ziqhubele phambili amashishini azo. Usenokukhumbula ukuba uAngi (owayefudula eluLuhlu luka-Angie) wayengumxumi ophambili esithe samnceda ngokuphucula injini yokukhangela kwingingqi. Emva koko, ugxininiso lweshishini lwaluqhuba abathengi ukuba basebenzise inkqubo yabo ukunika ingxelo, ukuphonononga, okanye ukufumana iinkonzo. Ndandinentlonipho engathethekiyo ngeshishini
Uluhlu lokuTshekisha lokuCwangciswa kwePhulo: Amanyathelo ali-10 ukuya kwiziphumo eziphezulu
NgoLwesithathu, Juni 15, 2022 NgoLwesithathu, Juni 15, 2022 Douglas Karr
Njengoko ndiqhubeka nokusebenza nabathengi kumaphulo abo okuthengisa kunye namanyathelo okuqala, ndihlala ndibona ukuba kukho izikhewu kwimikhankaso yabo yentengiso ebathintelayo ekuhlangabezaneni namandla abo aphezulu. Ezinye iziphumo: Ukunqongophala kwengcaciso-Abarhwebi bahlala bethatha amanyathelo kuhambo lokuthenga olungabonisi ukucaca kwaye bajolise kwinjongo yabaphulaphuli. Ukusilela kwesikhokelo-Abathengisi bahlala besenza umsebenzi omkhulu wokuyila iphulo kodwa baphoswe kakhulu